Bogga ugu weyn 10 Beddelka ugu Wanaagsan ee Beddelidda Filimmada Qarsoon 2022
Filimada iyo bandhigyada TV -ga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan nolosha. Awoodda lagu sii daayo filimka aad ugu jeceshahay meel kasta waa wax dhammaanteen ku raaxaysanno samaynta. Jacaylkani wuxuu kuu horseeday inaad ogaato Couchtuner dhinac ama dhinac kale.
Haddii aad ka soo qulquleysay Couchtuner, markaa waxaad u badan tahay inaad naxday markii aad aragtay in goobta la xiray.
Laakiin looma baahna in la walwalo, maadaama ay jiraan waxyaabo kale oo lagu beddeli karo Couchtuner oo ku siin kara isku mid, ama xitaa waayo -aragnimo qulqul wanaagsan.
Haddii aad raadineysay beddelka ugu fiican, markaa waxaad garaacday khamaarka, maxaa yeelay waan ku daboolnay!
Maqaalkani wuxuu sharraxayaa beddelka ugu wanaagsan ee Couchtuner oo aad dooran karto. Qaar waa bilaash, halka qaarna aysan xor ahayn.
Si kasta oo ay tahay, markaad wax akhrido, waxaad ogaan lahayd madal qulqulka kuugu habboon.
Waa maxay CouchTuner?
Couchtuner waa taxane TV -ga tooska ah iyo goob qulqul filim halkaas oo aad ka daawan karto filimada iyo waxyaabaha kale ee ka socda HBO, Turner, The CW, Cartoon Network, Warner Bros., CNN, Comics DC, Otter Media, iyo shirkado kale oo madadaalo oo waaweyn iyo istuudiyaha filimka bixinta.
Waxaa la bilaabay 2010 -kii, wuxuuna ka mid ahaa shabakadaha ugu caansan ee kuu oggolaanaya inaad si bilaash ah u baahin karto filimada.
Isticmaalayaasha ayaa si sahal ah ugu dhex mari kara mareegaha si ay u helaan waxyaabaha madadaalada ee ay jecel yihiin iyagoon bixin.
Couchtuner wuxuu u ahaa xog -ururin dhammaan taxanaha TV -ga. Dusha sare, waxaad ka heli kartaa dhammaan bandhigyada TV -ga ee ka muuqday TV -ga. Hadday tahay mid hore, mid hore ama mid cusub, Couchtuner ayaa ku helay.
Intaa waxaa sii dheer, Couchtuner wuxuu lahaa istcimaal isticmaale oo aad u fudud, sidaas darteed adeegsadayaashu way jeclaayeen. Waxaad baari kartaa waxyaabaha ku jira adoo dooranaya sii -deynno Cusub, Liiska Bandhigga TV -ga, ama waxaad raadin kartaa adigoo adeegsanaya baarka raadinta.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku sii deyn kartaa bandhigga TV -ga aad ugu jeceshahay HD oo isbeddel ku samayn kara tayada.
Si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca Couchtuner ayaa ah inaysan jirin badhanka soo dejinta.
Goobtu waxay martigelisay kaliya waxyaabaha ku jira warbaahinta ee goobo kale, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in adeegsadayaashu si toos ah uga soo dejistaan ​​filimada iyo taxanaha TV -ga.
Sidoo kale, goobta ayaa ka maqan shatiyo-xaquuqeed sharci ah waana la xiray.
QODOBKA LA XIRIIR: Nvidia Shield vs Roku Ultra: Sanduuqa Qulqulka ugu Fiican Sanadka 2022
Maxaa ku dhacay CouchTuner?
Couchtuner wuxuu ahaa madal onlayn ah oo kuu oggolaanaya inaad si toos ah u sii deyso bandhigyada TV -ga aad jeceshahay iyo waxyaabaha madadaalada ah.
Laakiin dhibaatadu waxay ahayd, ma soo degsan kartid fiidyowyadan.
Taasina waa sababta.
CouchTuner waxaa ku jiray agabyo xuquuqda daabacaadda oo sharci darro ahaa in la soo dejiyo, mana aysan lahayn liisanka xuquuqda lahaanshaha.
Markii isticmaaleyaasheedu si dhakhso leh u kordheen, waxay dareen badan ka heshay warshadaha madadaalada. Dareenkaasi wuxuu keenay iyaga safka hore, waxayna la kulmeen dacwado sharci ah oo ka yimid dadka haysta xuquuqda daabacaadda.
Eedeymahan sharci ayaa ku qasbay inay xiraan.
Tan iyo markaas, dadku waxay si dhakhso leh u horumariyeen goobaha CouchTuner clone sida; couchtuner.uk, couchtuner.edu, couchtuner.xyz, couchtuner.stream, iyo kuwo kale.
Ma jiraan Beddelka CouchTuner?
Haddii aad ahayd xubin daacad ah oo ka tirsan CouchTuner, markaa uma baahnid inaad walwasho maadaama aadan lumin wax weyn.
Waxaa jira beddello CouchTuner oo ku siin doona isla khibraddii aad ku raaxaysatay, iyo in ka badan.
Dhinaca kale, way adkaan kartaa in la helo aalado kale oo la isku haleyn karo oo la isku haleyn karo, badanaa sababta oo ah degellada bixiya filimada lacag -la'aanta ah waa sharci -darro waana ammaan ilaa xad.
Tani waa sababta lagugugula talinayo inaad ku dhegganaato goobaha qulqulka ee badbaadada iyo caanka ah sida Netflix, Hulu, iyo Amazon Prime.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan liis garayn doonaa waxyaabo kale oo lagu beddeli karo CouchTuner oo ku siin doona waayo -aragnimada ugu badan.
Akhri ALSO: Philo vs Sling TV: Adeeggeeda Socodkee baa ka jaban & ka fiican?
Hoos waxaa ku qoran liiska beddelka ugu wanaagsan ee Couchtuner oo aan lahayn amar gaar ah. Hubi inaad hesho mid adiga kugu habboon oo tijaabi maanta.
#1. Filimka Qorraxda
Laga bilaabo liiskeyga xulashooyinka ugu fiican ee CouchTuner waa SolarMovie. Goobtu waxay liis garaysaa filimada iyo bandhigyada TV -ga dhammaan noocyada kala duwan ee danayn kara dadka isticmaala.
Intaa waxaa sii dheer, is-dhexgalkeeda isticmaale ee si wanaagsan loo nashqadeeyay ayaa ka dhigaya run ahaantii mid fudud in la helo wax cusub oo isbeddelaya.
Adigoo ah isticmaale diiwaangashan, waxaad qiimeyn kartaa filimada iyo bandhigyada TV -ga, kaydin kartaa waxyaabo xiiso leh hadhow, oo codsan kartaa.
Diiwaangelintu gabi ahaanba waa bilaash, waxaadna marin u heli kartaa dhammaan riwaayadaha bandhigyada TV -ga ee aad ugu jeceshahay.
Sida CouchTuner, Solar Movie kuma kaydiso wax faylal ah server -keeda. Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa bixiya dhinac saddexaad oo aan xiriir la lahayn.
Netflix waa aalad aad u caan ah oo qulqulka internetka ah, oo leh malaayiin isticmaale. In kasta oo aysan xor u ahayn adeegsiga, Netflix waxay u oggolaaneysaa macaamiisha cusub inay sii daayaan filimada ay jecel yihiin iyo taxanaha TV -ga iyaga oo aan wax kharash ah ku bixin bishii ugu horreysay.
Malaayiin isticmaale ayaa ku mashquulsan madal, oo yaa noqon doonin? Tayada fiidiyaha sare, tayada kamarad qumman, waayo -aragnimo filim aan kala go 'lahayn oo aan lahayn xayeysiis dhibsanaya oo soo baxaya, gebi ahaanba waa u qalantaa.
Ka sokow tan, Netflix waxay bixisaa qayb filim Netflix kala duwan ah, oo loo yaqaan "Netflix Originals." Kani waa aruurinta filimo madadaalo leh oo xiiso leh, oo u gaar ah Netflix oo keliya.
Qorshaheeda lacag bixinta waa mid la awoodi karo. Waxaad kala dooran kartaa qorshaha is-diiwaangelinta aasaasiga ah, heerka caadiga ah, iyo kan khidmadaha ah midka kuugu habboon. Farqiga ayaa ah tayada sawirka iyo tirada aaladaha qulqulka ayaa kordha marka aad sare u qaaddo qorshayaasha is-diiwaangelinta.
QODOBKA LA XIRIIR: 6 Siyaabaha Ugu Fudud ee Loogu Heli Karo Netflix Lacag La'aan
Series9 waa beddel kale oo caan ah oo loo beddelo CouchTuner. Mareegtan waxay bixisaa ku dhawaad ​​bandhig kasta oo TV ah waxayna leedahay ururinta dhowr Anime sidoo kale.
Ka sokow bandhigyada TV -ga iyo taxanaha anime, tax9 ayaa sidoo kale bixiya filimo. Tani waxay ka dhigan tahay inaad heli karto filimadii ugu dambeeyay ee aad dooratay oo aad ku daawato tayada HD.
Si kastaba ha noqotee, sida CouchTuner, ma jiro badhanka soo dejinta goobta.
Iyadoo aan loo eegin, goobta ayaa leh interface si sahlan loo isticmaali karo kaas oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u hesho wax kasta oo filim ama muuqaal ah oo aad rabto.
Sidoo kale, uma baahnid inaad samaysato akoon si aad u daawato nuxurkaas. Gebi ahaanba waa bilaash. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad wax codsato, waa inaad marka hore samaysataa akoon.
#4. Dayactirka TV -ga Maalinlaha ah
Daily TV Fix waa bedel kale oo wanaagsan CouchTuner. Websaydaan ayaa ku tusaya dhammaan filimadii ugu dambeeyay iyo bandhigyadii TV -ga.
Laga soo bilaabo aflaamta ugu caansan illaa bandhigyada TV-ga ee aan caan ahayn, waxaad ka heli kartaa dhammaantood Daily TV Fix. Waxay haystaan ​​filimaan aad u tiro badan si ay kuu xiiseeyaan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka arki kartaa dhacdooyinka show -ga TV -ga ugu cusub bogga hore. Uma baahnid inaad ku rogto bogga hoose.
Guud ahaan, Daily TV Fix waa xal wanaagsan oo kugu mashquulin kara waxyaabaha fiidiyaha aad jeceshahay.
Waxay bixiyaan xiriiro qulqulid badan oo ku jira waxyaabaha aad jeceshahay, sida haddii midkood ku guuldareysto, waxaad isticmaali kartaa kan kale.
Intaa waxaa sii dheer, haddii midkoodna uusan shaqeynin, waxaad mar walba aadi kartaa madasha oo caawimaad weydiisan kartaa. Bulshadu waa firfircoon tahay, qof walbana wuxuu ka hadlaa bandhigga uu jecel yahay.
FIILE -KA DAILY TV
QODOBKA LA XIRIIR: 5 Istaraatijiyadood oo Fudud si aad u Hesho TV Cable Bilaash ah 2022
#5. Dhacdooyin Cusub
Laga soo bilaabo magaca, runtii waa ay fududahay in la qiyaaso in ay tahay madal baahinta onlineka ah taas oo kuu ogolaanaysa in aad daawato qaybaha cusub.
Haddii aad rabto in aad lasoco dhacdoyinkii ugu dambeeyay ee bandhigyada aad jeceshahay, markaa tani waa meesha aad tagi karto.
Intaa waxaa sii dheer, diiwaangelinta, waxaad heli doontaa liis ah dhacdooyinkii ugu dambeeyay kadib markaad gasho.
Dhacdooyinka Cusub waxay leeyihiin naqshad shabakad wanaagsan oo wax -qabad leh oo u fududaynaysa adeegsadayaasha inay maraan, iyo sidoo kale uruurinta filimada wanaagsan, iyo isku -xirnaanta qulqulka badan si aad u daawato dhacdada aad ugu jeceshahay.
Intaa waxaa dheer, goobtu waxay leedahay nidaam gole oo ay shakhsiyaadka ka hadli karaan bandhigyada ay jecel yihiin.
Uma baahnid inaad isdiiwaangeliso si aad u daawato filimada aad jeceshahay, si kastaba ha ahaatee, si aad qayb uga noqoto madasha, waa inaad isdiiwaangelisaa.
Si la mid ah inta badan aaladaha qulqulka tooska ah ee internetka, waxaad la kulmi doontaa xayeysiisyo badan inta aad sii qulqulieyso.
#6. Daawo Taxanaha
Haddii aad jeceshahay daawashada taxanaha TV -ga, riwaayadda, iyo anime, markaa degelkani waa beddel wanaagsan oo ku habboon fadhiga.
Watch Series wuxuu leeyahay taxane iyo dhacdooyin badan oo ka socda qaar ka mid ah taxanaha TV -ga ugu caansan iyo bandhigyada anime.
Intaa waxaa dheer, goobta waxay bixisaa tayada video HD oo dhan taxane TV iyo anime in ay ururinta. Sidaa darteed, waxaad ku daawan kartaa bandhigyada aad ugu jeceshahay si tayo sare leh oo aadan waxba seegin.
Aflaanta iyo musalsalka ku jira Taxanaha Daawashada gabi ahaanba waa bilaash. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad iska diiwaan geliso goobta ama aad gasho akoonkaaga Facebook si aad ugu raaxaysato astaamahan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad u adeegsan kartaa bar raadinta si aad u raadiso bandhigyada aad ugu jeceshahay.
QODOBKA LA XIRIIR: Amazon Prime ma ka fiicantahay Netflix sanadka 2022? Khibradeyda
Beddelka kale ee CouchTuner waa Fmovies. Waa madal qulqulka tooska ah oo toos ah oo bixisa ilaha URL halkaas oo adeegsadayaashu ku qulqulayaan ama soo dejisan karaan aflaamta ay jecel yihiin.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay ururin ballaaran oo filimaan tayo sare leh iyo bandhigyo TV oo leh qoraal-hoosaadyo aad ku raaxaysan karto.
Websaydhka waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid adeegsada-saaxiibtinimo leh, oo leh is-dhexgal habboon oo habaysan, oo siinaya adeegsadayaasha khibrad durdur la'aan ah.
Filimyadu waxay u oggolaanayaan isticmaalyaasheeda inay codsadaan bandhigyada TV-ga ee ay jecel yihiin iyo filimada. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad keentaa aqoonsiga iimaylka iyo magaca filimka si aad u gasho.
Put Locker waa mid ka mid ah aaladaha qulqulka oo aad ugu eg CouchTuner.
PutLocker wuxuu aad ugu fududeeyaa adeegsadayaasha inay ku dhex maraan nidaamka iyagoo u kala soocaya waxa ku jira si toos ah.
Iyada oo leh qaybahan, waxaad ku baari kartaa iyadoo loo eegayo nooca, filimka, taxanaha TV -ga, sanadka siidaynta, iyo codsiyada.
Mid ka mid ah astaamaha gaarka ah ee meel iska dhigaya PutLocker waa nidaamka qiimeynta. Bandhig -TV kasta iyo filim kasta waxay la yimaadaan qiimeyn. Qiimeyntan waxay ka caawisaa dadka isticmaala inay go'aansadaan filimada iyo bandhigyada mudan in la daawado, iyo kuwa aan ahayn.
Dhinaca kale, dhinaca hoose ee tani waa xayeysiisyada joogtada ah ee soo booda.
Soap2day waa goob kale oo qulqulka tooska ah oo toos ah oo beddel u ah CouchTuner.
Halkan, waxaad ka daawan kartaa bandhigyada TV-ga, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo filimo cusub iyo kuwo qadiimi ah.
Soap2day waxay siisaa isticmaalayaasha waayo-aragnimada qulqulka aan xad lahayn iyadoo siinaya qayb qayb habaysan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira shaandheyn ka caawisa isticmaalayaasha inay arkaan waxa socda, aadka loo daawado, iyo isticmaalayaasha ugu sarreeya.
Muuqaalka ugu dambeeya waa nooca nooca (IMDB) maadaama ay kaydiso waqti si loo furo tab kale si loo arko qiimeynta.
Filimada laga heli karo madalkan waxay ka kooban yihiin Action, Adventure, Animation, Documentary to Mistry, Thriller, War, iyo qaar kaloo badan.
QODOBKA LA XIRIIR: Lacag ku Bixiya Si Toos ah: Youtube, Twitch, Facebook
Isu -soo -uruurinta liiskeyga beddelka CouchTuner waa Primewire. Primewire waa madal qulqulka internetka oo wanaagsan oo leh interface si sahlan loo isticmaali karo.
Primewire waxay u sahlaysaa adeegsadayaasha inay helaan bandhigyada TV-ga iyo filimada ay jecel yihiin maxaa yeelay is-dhexgalka ayaa si fiican loo dhigay oo loo habeeyay.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan Primewire waa inaad ku daawato filimada qaraaro kala duwan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad diwaangeliso oo aad qiimeyso waxa ku jira.
Hoos -u -dhaca madal -hoosaadkan ayaa ah in marar badan la jabsado. Markay taasi dhacdo, si otomaatig ah ayaa loo xiraa.
Haddii aad tahay qof jaceyl filim ah, markaa waxaan ku qiyaasayaa inaad jeclaan lahayd qoraalkan, maadaama ay muujineyso beddelka ugu wanaagsan ee CouchTuner.
Soo hel midka adiga kugu habboon oo ku raaxayso qulqulka filimada aad jeceshahay iyo bandhigyada TV -ga.
19 Hiwaayadood oo Lacag kuu Sameeya 2022
30 -ka ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan EPL 2021 | Faallooyinka ugu Fiican
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ah mid ay ku xoog badan yihiin ciyaartooyda kubbada cagta adduunka ugu sareysa. Halkan, tartanka waa…
Sida Loo Qariyo Barnaamijyada Android | Tilmaamo iyo Tilmaamo Fudud
Qarinta abka Android waa hal dariiqo oo lagu ilaaliyo macluumaadka xasaasiga ah ee taleefankaaga. Haddaba, haddii aad…